ထုတ်ကုန်များ > 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline (162364-72-9)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline (162364-72-9) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
နာမ် 1 ။ 162364-72-9
2 ။ 4-chloro-6-methoxy-7- (phenylmethoxy) quinazoline
3 ။ 4-Chloro-6-methoxy-7-benzyloxyquinazoline
4 ။ 4-chloro-7-benzyloxy -6-methoxyquinazoline
5 ။ 7- (benzyloxy) -4-chloro-6-methoxyquinazoline
6 ။ 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline
7 ။ 7-BENZYLOXY-4-CHLORO-6-METHOXY-QUINAZOLINE
အပြုံးများ CC ကို = NC =2(C1 = CC ကို (OC) = ကို C (ကို C = 2) OCC3 = CC ကို = C3 (= CC ကို)))
Inchi Key ကို LBGYCBNJBHZSZ-UHFFFAOYSA-N ကို
CAS အရေအတွက် 162364-72-9
CAS အောင်မင်း 95.0%
CAS မက်စ် 100.0%
အရည်ပျော်မှတ် 132 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
မော်လီကျူးအလေးချိန် 300.74 g / mol ။
နှမြော Spectrum အစစ်အမှန်ဖြစ်သော
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline (162364-72-9)
သငျသညျ 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline (162364-72-9) ၏အသေးစားသို့မဟုတ်အမြောက်အမြားကိုဝယ်ဖို့နေရာရှာနေခဲ့ဖူးသလော တော့ဘူးကွညျ့ဖို့မလိုအပ်ရှိပါသည်။ APICMO မှာငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဖြေတစ်ခုရှိသည်။ ကျနော်တို့အသေးစားနှင့်အမြောက်အမြားအတွက် 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် CGMP ၏စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်။
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline Quinazolines ၏အမျိုးအစားအောက်တွင်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
phosphodiesterase10A (PDE 10A) ၏စွမ်းရည်မြှင့်ပေါ် မူတည်. အကြားဆက်ဆံရေးမော်လီကျူး Configurations နဲ့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိ၏ဆှဖှေဲ့ဆုံးဖြတ်ရန် 10 ဒြပ်စင်ပါဝင်သော, PQ-32 inhibitors ။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ PDE 10A အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြား PDEs တားဆီးနိုင်မည်ကိုဘယ်လို, tomography (PET) ligands ၏ positron ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းစသည်တို့မှာသူတို့ရဲ့သက်တမ်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက် 60r7အတွက် quinazoline ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းသို့မဟုတ် alkyloxy ဓာတုနှင့်၎င်းတို့၏ PDE10A ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ PDE10Aas အားဖြင့် PDE3A ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်တိုးမော်လီကျူးသို့မဟုတ် quinazoline'ssixth ဇာတ်စင်မော်လီကျူးအဘို့အ methoxy အုပ်စုတစ်စုမိတ်ဆက်၏ရလဒ်ရှိပါသည်။ 6, quinoxaline ၎င်း၏ဧရိယာ၌ 7-difluoride ၏အစားထိုးတှငျကြှနျုပျတို့အလားတူကောက်ချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလားအလာနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖလိုရင်း (R) -7- (fluoromethoxy) -6-methoxy-4- အားဖြင့်ပြသထားသည် (3- (quinoxalin-2-yloxy) pyrrolidine-1-yl) quinazoline (16 တစ်ဦး), 19 ကြော်ငြာ, (R) - tert -butyl-3- (6-fluoroquinoxalin-2-yloxy) pyrrolidine-1-carboxylate (29), 35 (IC50 PDE10A 11-65 nm) ။
PQ-10, quinazolines ၏%7မှ fluoloethoxy ၏ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်တိုးတက်သည့်ဇီဝြဖစ်တည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုအတွက်ကျနော်တို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography များအတွက် constructive10F ကာကွယ်ဆေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ် PDE18A အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ QSAR သုတေသန၏အကူအညီနှင့်အတူကျနော်တို့သွား fluorinateddialkoxybiarylfibers တီထွင်ခဲ့ကြပြီး PDE10A ၏ inhibitors အဖြစ်သူတို့ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 7-fluoromethoxy အရောအနှောအစဉ်အမြဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline 11 ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်းများရှိပြီး:
benzyl ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine
benzyl 5-methoxy ...
benzyl 2-အမိုင်နို-5 ...
benzyl 3-methoxy ...
အဆိုပါထုတ်ကုန် 11 ရှေ့ပြေးထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ဓာတုနှင့် 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
covalent ဘွန်း 1-ယူနစ်
rotate စဘွန်း 4-ယူနစ်
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘွန်း4ယူနစ် count- လက်ခံသူ
အဘယ်သူမျှမ count- အလှူရှင်
အဆိုပါ Undefined ဘွန်း၏ StereocenterCount 0
အဆိုပါသတ်မှတ်ထားသောဘွန်း၏ StereocenterCount 0
အဆိုပါ Undefined Atom ၏ StereocenterCount 0
အဆိုပါသတ်မှတ်ထားသော Atom ၏ StereocenterCount 0
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 21
Xlogp3-AA ကို 3.9
အတိအကျ Mass 300.067 g / mol ။
MonoisotopicMass 300.067 g / mol ။
Topological Mass ၏ Surface ကဧရိယာ 44.2 တစ် ^ 2
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADccB7MAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8YI
မော်လီကျူးအလေးချိန် 300.742 g / mol ။
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနအတွက်အသုံးဝင်သည်။
သင်က mishandled လျှင် 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazolinemight သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ရှိစေသတည်း။ သငျသညျထိုကြောင့်ထိုအတူဆက်စပ်အချို့အန္တရာယ်များမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့သတိဓာတုပြုမူဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာအထက်တွင်အန္တရာယ်များရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ရှောင်ရှားရန်ဝင်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သည့်အခါသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline အတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါကဲ့သို့သော, သင်အောက်ပါအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသေချာ
ထိုကဲ့သို့သောအတည်ပြု respiration အဖြစ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှုအရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
အဆိုပါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများသေချာမှုန် filter များရှိသည်။
သငျသညျ 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြသည့်အခြေအနေမဆိုအချိန်, အရေးပေါ်အခြေအနေများမည်သည့်အချိန်တွင်မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအရေးပေါ်အခြေအနေဝင်းနှင့်အတူဆက်စပ်အန္တရာယ်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖော်ထုတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကူအညီစီမံခန့်ခွဲသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးပါမည်။ ဒီနေရာတွင်အမြဲကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယအောက်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအကူအညီအစီအမံတချို့ရှိနေပါတယ်။
ဓာတု ofthe စားသုံးမိပေါ်၌
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆက်သွယ်မေးမြန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆေးကြောဖို့အအေး, သန့်ရှင်းသောရေများ copious ငွေပမာဏကိုသုံးပါ။
အကြောင်းကို 10 မိနစ်များအတွက်မျက်စိရေချိုးဖို့ရေအေး running များများသုံးပါ
1 ။ ဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြု:
ပိုးအဝတ်ထွက်ကို ယူ. အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာအရပျထဲကသူတို့ကိုယူသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးရှေ့တော်၌ပြန်သုံးလို့မရကြဘူး။
2 ။ 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline ၏သိုလှောင်မှုကို
ဓာတုသိမ်းထားဖို့ကောင်းစွာ-labeledoriginal ကွန်တိန်နာကိုသုံးပါ။ ဖော့ဆို့သိုလှောင်ပုလင်းတင်းကျပ်စွာ။
နေရောင်ခြည်သို့မဟုတ်ပူမျက်နှာပြင်အောက်မှာစောင့်ရှောက်ကြပါဘူး။ အပူချိန် 50 ° C / 122 ထက်မပိုသင့်တယ် F ကို°။
3 ။ မတော်တဆထိန်းချုပ်မှုအစီအမံ
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline သို့မဟုတ်ယင်း၏အလယ်တန်းထုတ်ကုန် rigger မီးပါဝင်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေချိန်မှာဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ဒီမှာသင်စဉ်းစားသင့်အချို့သောမီးသတ်သမားအစီအမံနေသောခေါင်းစဉ်:
မီဒီယာ extinguishing သင့်လျော်သောမီးနှင့်အတူမီးကိုချွတ်ထားပါ။ ဤရွေ့ကားခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ပါဝင်သည်။
အကာအကွယ်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်မီး Fight ။ ဤသည်မျက်စိနှင့်အသားအရေနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ရတဲ့ရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံအကွာအဝေးကနေမီး Fight ။
အဓိကမီးလောင်မှုသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲမှု၏အမှု၌, မီးမတိုက်ပါဘူး။ ဆိုက်ရွှေ့ပြောင်း။
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline လောင်ကျွမ်းခြင်းကနေရရှိလာတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အငွေ့၏အချို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက် (HCl), ကာဗွန် (ii) အောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ် (HOx) ဖြစ်ကြသည်။
မတော်တဆ spillages ၏အမှု၌, တံဆိပ်ကပ်စွန့်ပစ်ခြင်းကွန်တိန်နာအတွင်းစွန့်ပစ်နှင့် pack ကိုစုဆောင်းပါ။ ဒေသခံများနှင့်ဖက်ဒရယ်စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစည်းမျဉ်း၏အာဏာရှင်အညီစွန့်ပစ်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
4 ။ သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း
သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်, 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းမရှိအန္တရာယ်များရှိနေပါသည်။
5 ။ တည်ငြိမ်မှုနှင့် reactivity ကို
6 ။ စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းအစီအမံ
သင့်လျော်တဲ့စွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာအတွင်းစွန့်ပစ် package နှင့်လိုင်စင်ရစွန့်ပစ်ခြင်းကုမ္ပဏီမှတင်ပြရမည်။
သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazolineis များအတွက်ချုပ်ရည်ရွယ်ချက်။ ကရမယ်ကိုင်တွယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည်, ဓာတ်ခွဲခန်းအလေ့အကျင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူထိုကြောင့်, bewell-လေ့ကျင့်သင်ကြားပုဂ္ဂိုလ်များ။ အရည်အချင်းပြည့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးဓာတု၏အသုံးပြုမှုကိုကြီးကြပ်ဖို့မရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်သင့်လျော်သောအခြေအနေများအောက်တွင်လေးစားမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ခံရဖို့သင့်၏။ အဆိုပါထုတ်ကုန်လူ့စားသုံးမှုများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်ဤစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးမှမှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါဟာသတင်းအချက်အလက်နဲ့အခြားသတင်းရပ်ကွက်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်လမ်းညွှန်အဖြစ်ထို့ကြောင့်အသုံးဝင်သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ကြောင်းသေချာစေရန်, ကျွမ်းကျင်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းထိုကဲ့သို့သောဓာတုသိပ္ပံ, Chromatography, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိပ္ပံ, အခြားသူတွေအကြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိပ္ပံအဖြစ်နယ်ပယ်များတွင်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှကျူးလွန်နေသည်။
သငျသညျ 7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinazoline အမြောက်အမြားမှာနေရာတစ်နေရာရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖော်ရွေဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအစဉ်အဆက်သည်သင်တို့ထံကစကားကိုနားထောငျဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်နှင့်သင့်ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်, ဖွံ့ဖြိုးရေးသို့မဟုတ်သုတေသနအဘို့သင့်အမြောက်အများအမိန့်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Marcel Lindemann Sonja, HinzWinnie, Deuther-Conrad, ဘာဘရာ Wenzel, ရေဒီယိုပေါင်းစပ်နှင့် fluorine တို့-18 ၏ Vivo အကဲဖြတ်အတွက် adenosine တစ်ဦးက 2B အဲဒီ receptor ၏ပေပုံရိပ်, စာမျက်နှာ 2-5 များအတွက် pyrazine အခြေစိုက်ရေဒီယို ligand ကပ်ထားပါတယ်။
ရှိသူများအတွက်ဓာတုဘေးအန္တရာယ်6၏ Bretherick ရဲ့လက်စွဲစာအုပ်ခုနှစ်တွင် Pitt, MJthed; Urben, PG Ed က; Butterworth-Heinemann, Ltd: အောက်စ်ဖို့, 1999; Vol.2, pp301-310 ။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem, အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် 4,4-Difluorocyclohexanone, ကဏ္ဍများ 1-8 ။